ဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများသည်ကမ္ဘာ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲဖြစ်သည်။ ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲလမ်းမှုနှင့် cyberex စွဲလမ်းမှုအတွက်သင့်တော်သည်။ "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ " လက်ရှိသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုချက်အရညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများရှိနေသည်။ ဥပမာစာရင်းအနည်းငယ် -
ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 55 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 31 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 55 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 270 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်, ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15။ သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံးမှသည် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ - ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ US ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်ငယ်ရွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာမှုကိုဖော်ပြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သောဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုသည်ဆရာဝန်များကတင်ပြသည်။
တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ပေါင်းစပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစား: ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-execution model (2016) ၏တစ်ဦး Interaction။ - အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသည့်ရောဂါအပါအဝင်တိကျသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားသောအခြေခံယန္တရားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စာရေးသူများအနေဖြင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများစွဲခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှုကိုအင်တာနက်သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာပြdisနာများအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။
အင်တာနက်အပြာအသုံးပြုသူများ၏ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လည်ပတ်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) - သိသိသာသာစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိသောဂျာမန် fMRI လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစဉ်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆုလာဘ်တိုက်ဖျက်ရေးကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ သုတေသီများကသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များအရပိုမိုနှိုးဆွရန်လိုအပ်မှုကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သည်းခံနိုင်ခြင်းတို့ကိုပြသခဲ့သည်။
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှလေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်အရက်သေစာသောက်သုံးသူများ၏ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်လက်ခံထားသောစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရသည် မဟုတ် ပိုပြီး "က" ကြိုက်တယ်။ သုတေသီများကလည်း (၆၀%) ဘာသာရပ်များ (ပျမ်းမျှအသက် - ၂၅ နှစ်) သည်မိတ်ဖက်များနှင့်စိုက်ထူခြင်း / နှိုးဆွမှုရရှိရန်အခက်အခဲရှိသော်လည်း၊
အသစ်အဆန်း, အခြေအနေများနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များ (2015) မှ - ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများအားလိင်မှုဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေ့ကျင့်သည်။ အသစ်အဆန်းကို ဦး စားပေးကြိုတင်မတည်ရှိသေးသောကြောင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်အလေ့အကျင့်များနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးပမ်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေသည်။
ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ၏အာရုံကြောအလွှာ (2015) - ဤကိုရီးယား fMRI လေ့လာမှုသည် porn အသုံးပြုသူများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြား ဦး နှောက်လေ့လာမှုများကိုပုံတူပွားသည်။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ပုံစံများကိုထင်ဟပ်စေသောလိင်စွဲသူများအတွက် cue- သွေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းပုံစံကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂျာမန်လေ့လာမှုများနှင့်အညီမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏လေ့လာချက်များအရ prefrontal cortex ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် - ဤ EEG လေ့လာမှုမွှမ်းတင်ခဲ့ပါသည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး) ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။ ယင်းနှင့်အတူအညီ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုများ, ဒီ EEG လေ့လာမှု လည်း ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံထားသည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန် - porn ပိုမိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate လိမ့်မယ်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, လေ့လာမှုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နီကိုးလ် Prause "မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်" porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာရှိခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာမရှိသေးပါလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြောပါ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက် (ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်ဘာသာရပ်များ '' အလိုဆန္ဒဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျဆင်းနေခဲ့သည်) ။ အတူတူအဲဒီနှစျခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များအရ (ရုပ်ပုံများကို) ကြည့်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားသော်လည်းသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကို (လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းသည်။ ဒါကစွဲလမ်းမှု၏အမာခံများဖြစ်သော sensitization & desensitization ။ ရွယ်တူချင်းသုံးသပ်သည့်စာစောင်ခုနစ်ခုကအမှန်တရားကိုရှင်းပြသည် - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7။ ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည်) 2013: ဖယ်စာနယ်ဇင်းများတွင်အများအပြားကလက်ခံတောင်းဆိုမှုများကနေ, အဲဒါကိုအလေးအနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရအဖြစ် Prause ရဲ့ 1 ကြက်ဥလေ့လာမှု, peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းရဲ့ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ); 2) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲအဘို့အပြမရ; 3) လေ့လာမှုခဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု; 4) မေးခွန်းခဲ့ကြသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲဘို့အတည်ပြုမပေး. အယ်လ်မှာသံမဏိ။ အလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အထက်ဖော်ပြပါစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်ချက် ၂၄ ခုမှ ၄ ခုသာရှိသည် ကဖော်ပြနှောင့်အယှက်နှစ်ခုတစ်ဖက် (စွဲလမ်း၏အရိပ်လက္ခဏာ) နဲ့လိင်အဘို့လျော့နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ cue-reactivity ကို correlating အဖြစ်ကိုးကားစဉ်နှစ်ခု, လက်မခံနိုင် junk သိပ္ပံအဖြစ် critiquing ။
ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅) - တစ်ဦးကစက္ကန့် EEG လေ့လာမှုကနေ နီကိုးလ် Prause ရဲ့အဖွဲ့။ ဒီလေ့လာမှုကမှအ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ခဲစာရေးသူက "ဒီရလဒ်တွေကိုမလုပ်ပဲporn စွဲ debunk။" ဘာ တရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင် သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်? ၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014), အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015 သောဤစာရင်းထဲတွင် #13 ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အခြား EEG လေ့လာမှု အမြိုးသမီးမြားတှငျပိုမို porn အသုံးပြုမှုကို porn မှ ဦး နှောက် activation နှင့်ဆက်နွယ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ ရှစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8။ Prause (သူမ၏ EEG ဖတ် "cue-reactivity ကို" အကဲဖြတ်ကြောင်းတရားကိုဟောပြောာင်း), အစားလေ့ထက်။ Prause မှန်ကန်သောခဲ့ကြသည်ရင်တောင်သူမအဆင်ပြေသူမ၏ "မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" အခိုင်အမာအတွက် gaping ပေါက်လျစ်လျူရှု: ရင်တောင် Prause et al ။ 2015 မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်း cue-reactivity ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဖူး, 21 သည်အခြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော (ထိခိုက်လွယ်) သတင်းပေးပို့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21။ သိပ္ပံလေးနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်မလွယ်ကူသည့်တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုနှင့်အတူမသွားဘူး, သိပ္ပံသင်မဟုတ်လျှင် (သက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင်အတူသွား အစီအစဉ်-မောင်းနှင်နေကြသည်).
Hypersexual Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Dysregulation (2015) - အမျိုးသားလိင်စွဲလမ်းသူ (၆၇) ဦး နှင့်အသက်အရွယ်အလိုက်ထိန်းချုပ်မှု (၃၉) ခုပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခု။ Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) ဝင်ရိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်သည်။ စွဲ ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပြောင်းလဲ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ HPA ဝင်ရိုးမှဦးဆောင်။ လိင်စွဲ (hypersexuals) ပေါ်မှာဤလေ့လာမှုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူတွေ့ရှိချက် mirror ကြောင်းပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ (2016) ၏ရောဂါလက္ခဏာများဆက်နွယ်နေကြောင်းသောအခါ Ventral striatum လှုပ်ရှားမှု - ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနံပါတ် (၁) ။ ။ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်ဆုပေးစင်တာလှုပ်ရှားမှု (ventral striatum) သည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် # ၂။ Ventral striatum ဓာတ်ပြုမှုသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုရမှတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုလုံးက sensitization ကိုပြသပြီး the နဲ့ align လုပ်ပါ စွဲမော်ဒယ်။ စာရေးသူဖော်ပြသည်မှာ -အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ၏အာရုံကြောအခြေခံသည်အခြားစှဲဖို့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။"
ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016) - အဓိကတွေ့ရှိချက်နှစ်ခုကိုပုံတူပြုလုပ်သည့်ဂျာမန် fMRI လေ့လာမှု Voon et al ။ , 2014 နှင့် Kuhn & Gallinat 2014။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များ - CSB အုပ်စုတွင်အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေနှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သုတေသီများအဆိုအရပထမပြောင်းလဲမှု - ပိုမိုမြင့်မားသောအမဂဒလာကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည် - အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအေးစက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအပြောင်းအလဲ - ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်း - Impulses သတင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်စွမ်းရည်ချို့တဲ့ခြင်းအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသီများက“ဤရွေ့ကား [ပွောငျးလဲ] စွဲရောဂါနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လိုငွေပြမှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏။ " တွေကိုပိုမို amygdalar activation ၏တွေ့ရှိချက်များ (ာင်း) နှင့်အကျိုးကိုစင်တာနှင့် prefrontal cortex (အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားhypofrontality) ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်အဓိက ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် compulsive porn သုံးစွဲသူ ၂၀ အနက် ၃ ခုသည်“ orgasmic -rection disorder” ခံစားခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးသိမှု-အပြုအမူကြည့်ရန် မှစ. ကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီကိုစဉ်းစား (2014) - လိင်၏အလုပ်မဖြစ်အသုံးပြုမှုကျဘာစွဲ (CA) နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏ဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့။ အဲဒီမှာ, CA မှအားနည်းချက်၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနဲ့အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့သက်သေသာဓကများကိုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြသ။
Prefrontal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: neuropsychological နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုသီအိုရီမော်ဒယ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (2015) - ဤအချက်နှင့်အညီအလုပ်လုပ်သည့် neuroimaging နှင့်အခြား neuropsychological လေ့လာမှုများမှရလဒ်များသည် cue-reactivity, craving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ရန်အတွက်အရေးကြီးသောအယူအဆဖြစ်သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချအပေါ်တွေ့ရှိချက်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူစွဲနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက်တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူအများအပြားတူညီလည်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခုစွဲအဖြစ်ခွဲခြား၏အလေးပေး။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသုတေသနအနေဖြင့်တွေ့ရှိချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီး cybersex စွဲနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်အခြားအပြုအမူစွဲအကြားနှိုင်းယှဉ်အလေးပေး။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအထီးအတွက်ဘာစွဲ (2015) ဆုံးဖြတ် - မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များက CyberSex စွဲလမ်းမှု (CA) ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားနိုင်မှုအညွှန်းကိန်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် CA လက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီစေ့စပ်ဖြန်ဖြေမှုကိုလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းများသည် CA ၏လက္ခဏာများ၊ လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအကင်းပါးပါး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်စစ်မှန်သောဘဝနှင့်အွန်လိုင်းရှိလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်သည်။ ထို့အပြင်သင်တန်းသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုမတိုင်မီနှင့်အပြီးတွင်သူတို့၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်များသည် CA လက္ခဏာများနှင့်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုညွှန်ကိန်းများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအကြားပြင်းထန်သောဆက်နွယ်မှုများပြသခဲ့သည်။ , CA အော့ဖ်လိုင်းလိင်အပြုအမူများနှင့်အပတ်စဉ်ဆိုက်ဘာအသုံးပြုမှုအချိန်နှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် CA. အကြားဆက်ဆံရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကမကထပြုခဲ့ ရလဒ်များသည်ယခင်လေ့လာမှုများတွင်လိင်ကွဲယောက်ျားများနှင့်မိန်းမများအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ CA ၏သီအိုရီအရယူဆချက်များ၏နောက်ခံကိုဆန့်ကျင်။ ၊ cyberex အသုံးပြုမှုကြောင့်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်ခြင်း၏အခန်းကဏ္highlightကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ (2016) ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီး - cybersex စွဲ၏ရောဂါရှာဖွေရေးစံနှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်သူမျှမသဘောတူညီမှုရှိပါသည်။ အချို့သောချဉ်းကပ်မှုများသည်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်တူညီသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာလိင်ကွဲလိင်ခြားသူအမျိုးသား ၈၆ ယောက်ဟာ Cyberexexc စွဲလမ်းမှုမှာတွဲဖက်လေ့လာသင်ယူမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ pornographic ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့ Instrumental Transfer Task to Standard Pavlovian ကိုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုအပေါ်စွဲလမ်းမှုတို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိving္လိုချင်တပ်မက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များသည်တွဲဖက်လေ့လာမှုအားဖြင့်တည်းဖြတ်သည့်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုအပေါ် ဦး တည်သည့်သဘောထားများအပေါ်ပုဂ္ဂလဒိc္ဆန်သောတွန်းအား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤတွေ့ရှိချက်များကဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆက်စပ်မှုလေ့လာခြင်း၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္towardsကိုညွှန်ပြနေပြီး၊
Neurophysiological တွက်ချက်မှုချဉ်းကပ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းခြင်း (2018) - ကောက်နုတ်ချက်: ဤစာတမ်း၌, EEG သုံးပြီးဖမ်းယူတိုကျရိုကျဧရိယာကနေဦးနှောက်ကို signal ကိုသုံးပြီးတစ်နည်းလမ်းပါဝင်သူ porn စွဲသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ရှိစေခြင်းငှါရှိမရှိ detect လုပ်ဖို့လျာထားသည်။ ဒါဟာဘုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာတစ်ခုဖြည့်စွတ်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ စမ်းသပ်ရလဒ်များစွဲသင်တန်းသားများကို Non-စွဲသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်တိုကျရိုကျဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌အနိမ့် alpha လှိုင်းတံပိုးလှုပ်ရှားမှုခဲ့ကြောင်းပြသပါ။ ဒါဟာအနိမျ့ဆုံးဖြတ်ချက် Electromagnetic Tomography (LORETA) ကို အသုံးပြု. တွက်ချက်ပါဝါဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများ အသုံးပြု. ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ theta တီးဝိုင်းလည်းစွဲနှင့် Non-စွဲအကြားကွာဟမှုလည်းမရှိပြသ.
မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူ (2018) နဲ့တဦးချင်းစီတို့တွင်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု - fMRI လေ့လာမှု။ အကျဉ်းချုပ် - ... လေ့လာမှုမီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (လိင်စွဲ) တို့တွင်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည်။ ပို. အရေးကြီးသည်, အမှိန်ဖျော့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအဆိုး PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PHB ၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများသို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသညျ။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့သဘောထားတွေ: ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကွာခြားချက်များ (2018) - ကောက်နှုတ်ချက်: ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာအဘို့အညွှန်းကိန်းကကမကထပြုခဲ့ IPD ၏အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်စွဲ-related တွေကို၏မက်လုံးပေး salience ပတ်သက်. ကျနော်-PACE မော်ဒယ်၏သီအိုရီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ addressing လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။
ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Stroop Task ကို (2018) စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲ Prefrontal နှင့်ယုတ်ညံ့ Parietal လှုပ်ရှားမှု porn / sex စွဲသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာရန် ffRI နှင့် neuropsychological လေ့လာမှု။ တွေ့ရှိချက်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏လေ့လာမှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲသူများသည်အလုပ်အမှုဆောင်အားနည်းသောပြသနာများဖြစ်ပြီးဆေးစွဲသူများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်စမ်းသပ်မှုအတွင်း PFC ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်စွဲလမ်းမှု၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားဖြစ်သောပိုမိုညံ့သော prefrontal cortex လည်ပတ်မှုကိုညွှန်ပြသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့စိတ်သဘောထားနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ရိုနှင့်ပြည်နယ် Impulse (Antons & Brand, 2018) - ကောက်နှုတ်ချက်: ၏ Dual-ဖြစ်စဉ်ကိုမော်ဒယ်များနှင့်အတူအညီ စှဲမွဲမှု, ရလဒ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအရာထကြွလွယ်သောနှင့်ရောင်ပြန်စနစ်များအကြားတစ်ဦးမညီမမျှ၏ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များကြုံနေရဆိုသော်ငြားအင်တာနက်ကို-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Impulse နှင့်ဆက်စပ်ရှုထောင့်၏ရှုထောငျ့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2019) ၏အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စည်းကမ်းတအသုံးပြုမှုအကြားခွဲခြား -Excerpts: စည်းကမ်းတအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလျှော့နှောင့်နှေး, တဏှာ, အာရုံစူးစိုက်မှုကို Impulse များအတွက်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ပြပြီး, အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်းနှင့် functional ဖြစ်စေဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးတို့အတွက်လိုအပ်များအတွက်နိမ့်ဆုံးရမှတ်။ ရလဒ်တချို့ Impulse ၏ရှုထောငျ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတဏှာနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုအနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကိုအဖြစ်ဆက်စပ်အချက်များကိုစည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်တိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်း။ ညွှန်ပြ ရလဒ်ကိုလည်းသီးခြားအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအပေါ်မော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာ
ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအလိင်ကွဲအထီးကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှု (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်: အတူတူယူရလဒ်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (အကြားမျဉ်းပြိုင်အကြံပြုGrant et al ။ , 2010) ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (အထူးသဖြင့်ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း) (အရက်သုံးမမှန်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုဆင်တူ, ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုထက်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုမြန်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Field et al ။ , 2008; Wiers et al ။ , 2011), ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း (Cousijn et al ။ , 2011; Field et al ။ , 2006), နှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲပုံမမှန် (Bradley et al ။ , 2004).
oxytocin အချက်ပြအပေါ် putative သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ hypersexual ရောဂါအတွက် microRNA-4456 ၏ Hypermethylation- ဆက်စပ် downregulation: miRNA ဗီဇ၏တစ် ဦး က DNA ကို methylation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Bostrom et al ။, 2019) - [ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်] ။ hypersexuality (ညစ်ညမ်း / လိင်စွဲလမ်းမှု) ရှိသည့်ဘာသာရပ်များအပေါ်လေ့လာမှုကအရက်သမားများတွင်ဖြစ်ပွားနေသောသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြထားသည်။ epigenetic အပြောင်းအလဲများသည်ချစ်ခြင်း၊ နှောင်ကြိုး၊ စွဲခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အရေးကြီးသော oxytocin system နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးဗီဇများ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုရောဂါများအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ခြားနားချက်များ (Draps et al ။, 2020) - [hypofrontaility: prefrontal cortex & anterior cingulate cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စ descreased] ကောက်နုတ်ချက်များ HC ပါဝင်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘေးဒဏ်သင့်သူများ (CSBD, GD, AUD) သည်ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိအထူးသဖြင့် orbitofrontal cortex တွင် GMV ငယ်များပြခဲ့သည်။ အများဆုံးသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု GD နှင့် AUD အုပ်စုများနှင့်အနည်းဆုံး CSBD အုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ CSBD အုပ်စုတွင် GMV နှင့်ရောဂါပြင်းထန်မှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ CSBD ရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုမှာညာဘက် anterior cingulate gyrus တွင် GMV လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
Hypersexual Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားများရှိ Plasma Oxytocin အဆင့်များ (Jokinen et al ။, 2020) - အထီး“ hypersexuals” (လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲသူများ) နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင် neuro- endocrine လေ့လာမှု (၄) ခုထုတ်ဝေသည့်သုတေသနအဖွဲ့မှ။ oxytocin သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောကြောင့်၊ မြင့်မားသောသွေးပမာဏကိုလိင်စွဲလမ်းသူများအတွက် overactive stress system ၏ညွှန်ပြချက်တစ်ခုအဖြစ်အနက်ဖွင့်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်သုတေသနပြုသူများ၏ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာကုထုံး (CBT) သည် hypersexual လူနာများတွင် oxytocin ပမာဏကိုလျှော့ချပေးခဲ့သည်။
တားမြစ်ထားသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပြproblemနာများအင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - အင်ဆူလာ၏အရေးပါသောဟန်ချက်ညီမှုအခန်းကဏ္ ((Anton & Brand, 2020) - စာရေးသူကသူတို့၏ရလဒ်သည်သည်းခံမှု၊ စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏ထူးခြားချက်ကိုဖော်ပြသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီ (ဥပမာ - Antons & အမှတ်တံဆိပ်, 2018; ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Gola et al ။ , 2017; Laier et al ။ , 2013), ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေနှစ်ခုလုံးအတွက်ပုဂ္ဂလဒိive္တဏှာနှင့်ပြaticနာအိုင်ပီအသုံးပြုမှု၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအကြားမြင့်မားဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် cue-reactivity ကိုတိုင်းတာရန်တွန်းအားများပြားလာခြင်းသည် IP ပြuseနာ၏ပြseverနာပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်သည်းခံမှုနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ Wéry & Billieux, 2017ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များပုဂ္ဂလဒိferences္ ဦး စားပေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ် ဦး ချင်းမခံခဲ့ရကြောင်းပေးထားသော) ။ ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုထားသောစံသတ်မှတ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည်ထကြွလွယ်သော၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် interoceptive စနစ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမြင့်မားသောလက္ခဏာပြင်းထန်မှုရှိသောလူများအား cue-reactivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်သောအားဖြင့်မစွမ်းနိုင်ပါ။
ပုံမှန် Testosterone ဟော်မုန်းနှင့်မြင့်မားသော Luteinizing Hormone Plasma Levels (ယောက်ျားများတွင် Hypersexual Disorder) (2020) - လိင်စိတ်နှင့်လိင်အကျင့်စွဲသူများ (လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသူများ) နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင် neuro-endocrine လေ့လာမှု (၅) ခုထုတ်ဝေသည့်သုတေသနအဖွဲ့မှ၊ စိတ်ဖိစီးမှုပြောင်းလဲခြင်း၊1, 2, 3, 4, 5။ ) ။ ကောက်နုတ်ချက်များ အဆိုပြုထားသောယန္တရားများတွင် HPA နှင့် HPG အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ဆုလာဘ်အာရုံကြောကွန်ယက်သို့မဟုတ် prefrontal cortex ဒေသများအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထိန်းချုပ်မှုကိုတားဆီးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။32 နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက hypersexual အမျိုးသားများတွင် LH ပလာစမာအဆင့်မြင့်လာခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပြခဲ့သည်။ ဤပဏာမတွေ့ရှိချက်များက neuroendocrine systems နှင့် HD တွင် dysregulation ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုင်ရာစာပေများကိုကြီးထွားစေသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုသောလိင်ကွဲလိင်ကောလိပ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ဘက်လိုက်မှုများကိုချဉ်းကပ်ပါ (၂၀၂၀) - Nအမျိုးသမီးညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးသုံးစွဲသူများအားယူရို - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုအရဆေးစွဲမှုလေ့လာမှုများတွင်တွေ့ခဲ့ရသူများကိုထင်ဟပ်စေသောတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြသည်။ porn (sensitization) နှင့် anhedonia (desensitization) ကိုဘက်လိုက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ လေ့လာမှုတွင်လည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ငါတို့သည်လည်း anhedonia တွက်ချက်သော SHAPS အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားချဉ်းကပ်ဘက်လိုက်မှုရမှတ်များနှင့်ရမှတ်များအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအချက်သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုအားကောင်းလေ၊ တစ် ဦး ချင်းကြုံတွေ့ခံစားရသည့်အပျော်အပါးနည်းလေလေဖြစ်သည်“ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်စိတ်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာသည်အပျြောအပါး (anhedonia) နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။
အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ပုဂ္ဂလဒိreward္ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုလူ့အသိုက်နှင့် Orbitofrontal cortex (၂၀၂၀) တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ - ကောက်နှုတ်ချက်: VSS ကြည့်နေစဉ်အတွင်း NAcc နှင့် caudate လှုပ်ရှားမှုအား VSS ကြည့်ရှုစဉ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းအကြောင်းအရာသည်ပိုမိုပြaticနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြသည့်အခါဤအသင်း၏အားသာချက်မှာပိုမိုများပြားသည်။ အဆိုပါရလဒ် NAcc အတွက်မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားပိုမိုနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှု, ပိုမိုဘာသာရပ်အတွေ့အကြုံများ PPU အကြားပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခွဲခြားသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းစွဲ debunk ကြောင့်အာရုံကြောလေ့လာမှုများကော? အဘယ်သူမျှမရှိတယ်။ အဆိုပါနေစဉ် ခဲစာရေးသူက of Prause et al ။ , 2015 သူမ၏တစ်ခုတည်းသော EEG လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုမှားယွင်းစွာသုံးသပ်ပြီးရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်း ၉ ခုကသဘောမတူပါ။ ဤစာတမ်း ၈ ခုမှအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များက Prause et al။ အမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ desensitization / လေ့ (စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း) အဖြစ် နည်းသော vanilla porn (ဓာတျပုံ) မှဦးနှောက်ကို Activation မှဆက်စပ်ခဲ့သည် သာ. ကြီး porn အသုံးပြုခြင်း။ မယုံကြည်သောသူတို့ကား, Prause et al။ အသင်းရဲရငျ့စှာဒီကနေယူတစ်ခုတည်းအပိုဒ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်မှားယွင်းစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိသည်ဟုအခိုင်အမာ 2016 "အယ်ဒီတာမှစာ။ " ဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုဖျောပွအဖြစ်အဖြစ်မှန်အတွက် Prause အက္ခရာ, ဘာမျှမလိမ်: အယ်ဒီတာ "Prause et al မှပေးစာ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု " (2016).
ကျနော်တို့ 340 ကျော်, ညစ်ညမ်းသည်အသုံးပြုသူများအပေါ်နောက်ထပ်ဦးနှောက်လေ့လာမှုများအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်+ ဦးနှောက်လေ့လာမှုများ “ အင်တာနက်စွဲသူများ” သည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင်ဖြစ်ပေါ်သောတူညီသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများကအခြားသောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုခွဲထုတ်ခြင်းမပြုပါ။ ဘယ်သူကအင်တာနက်သုံးတာလဲ သာ porn? တကယ်တော့သုတေသီများပြီးသား၏ဦးနှောက်ထဲသို့ကြည့်ရှုခဲ့ကြ Over-စား, အင်တာနက်အသုံးပြုသူ နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများ (နှင့် မူးယစ်ဆေးစွဲ) ။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းစီတွင်သုတေသီများသည်လုံလောက်သောပြင်းထန်သောဆေးမဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုသည်စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ desensitization, ာင်းနှင့် hypofrontality ။ (ဒါ့အပြင်တွေ့မြင်: အင်တာနက်စွဲအကျဉ်းချုပ်, မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုဦးနှောက်လေ့လာရေး Porn Includeနှင့် Porn အကြောင်းကောက်နှုတ်ချက်ပါဝင်တဲ့အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုလေ့လာရေး).
အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုအပေါ် ပို. ပင်လေ့လာမှုများရှိဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံရေး တစ်ချိန်ကကျဘာ / ညစ်ညမ်းလိုက်စားသူတွေကို၏တိုးမြှင့်အားနည်းချက်ယုတ်လျော့။ တစ်ဦးက 2006 ဒတျချြလေ့လာမှု erotica ပုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ အမြင့်မားဆုံးစွဲလမ်းအလားအလာ အားလုံးအင်တာနက် application များ၏။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အင်တာနက် erotica သည်အလွန်ကောင်းသည့်သဘာဝဆုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းရန်ကြိုးပမ်းနေသည်မှာထင်ရှားသောမိတ်လိုက်ခြင်းအခွင့်အလမ်းများ။
ဤအတောအတွင်း "လုံလောက်သောသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား" အငြင်းအခုံနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမှုမရှိခဲ့ဘူးရှိရာခိုင်လုံသောအငြင်းအခုံမဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီများသည်စီးကရက်သေစေလောက်သည့်ကြီးမားသောသွယ်ဝိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုခုခံကာကွယ်ရန်ဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီများသည်“ သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားနည်းနည်း” အငြင်းပွားမှုကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသတိရပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်သူတို့သည်ဆေးလိပ်သောက်သူများအားဆေးလိပ်သောက်သူများအား“ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်သင်၏အဆုတ်အတွက်ကောင်းသည်” ဟုအာမခံရန်ဆရာဝန်များကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်စွာချီတက်နိုင်ခဲ့သည်။ လစဉ်လေ့လာမှုအသစ်များသည်သဘာဝလွန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုလျှံစွာအသုံးပြုခြင်း (လောင်းကစားသမားများ၊ အစာစားသူများ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများစသည်တို့) ကို ဦး နှောက်တွင်စွဲလမ်းစေသောဖြစ်စဉ်များကိုပြသနေသည်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဆေးစွဲဆေးပညာ (ASAM) မှဆရာဝန် ၃၀၀၀ ဟာaအများပြည်သူကြေညာချက် အမူအကျင့်စွဲလမ်း (လိင်, အစားအစာ, လောင်းကစားဝိုင်း) အခြေခံကျကျဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင်းရှင်းလင်းထားသည့်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အစားအစာနှင့်လိင်အကြိုးစေသည်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry ရှိသည်။ တကယ်တော့ဒီရှင်သန်မှုယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာဦးနှောက်အတွက်ဤဆုလာဘ်မွတ်မပြေနိုင်သောသို့မဟုတ်များအတွက်တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများရှိ '' အလုံအလောက်။ ' စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်မှာ circuitry တစ်ဦးချင်းစီမှသတင်းစကားတ္ထုများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်နဲ့စွဲဆေးပညာ၏ American Society (ASAM behaviors.- ဆုလာဘ်နှင့် / သို့မဟုတ်သက်သာ၏ရောဂါဗေဒလိုက်စားမှဦးဆောင်သော '' ကိုပိုမို '' ဖြစ်လာကြောင်းအလုပ်မဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်လာ )
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ညာယားရဲ့အလွန်အကျွံသတိသတ်မှတ်ထားရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းပုံပေါ်ပါတယ်။ ယင်း၏အဖြေရှာတဲ့ manual ၏နောက်တစ်နေ့ထုတ်ဝေခြင်း, ICD, 2018 ထွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၏ beta ကိုမူကြမ်း အသစ်က ICD-11 "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" အတွက်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါဝင်သည် အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် "ဘို့တစွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေကြောင့် disorders။ "
ထို့အပြင်, သုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ရှိရဲ့ ချိတ်ဆက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲလမ်း, အနိမ့်ဦးနှောက်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ နှင့်ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုသို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများအများအပြား။ သူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်သို့မဟုတ်ပင်နုပျို-နေရသည်မှာသူတို့ကို၏စိတျပူပအသုံးပြုသူများအ-ပိုပိုပြီး၏ self-အစီရင်ခံစာများ:
အကြောင်းကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ ပိုပြီးအစွန်းရောက် porn မှတင်းမာမှုလျှော့ချ
Copulatory ခွန်အားမရှိခြင်း (porn ထိုသို့တက်ရနိုငျသညျ, ဒါပေမယ့်မရမိတ်ဖက်)
Uncharacteristic, ပိုမိုဆိုးရွားလာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် or ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း
ကြီးထွားလာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပင် အစွန်းရောက် porn အတူ။
porn Morphing ကြောင်းအရသာ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီပါ (ကဲ့သို့ HOCD)
အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, အစွန်းရောက် မငြိမ်မသက်သော
စီးပွားပျက်ကပ်, စိုးရိမ်စိတ်, ဦးနှောက်မြူ
တစ်ခါတစ်ရံတွင်စွဲလမ်းမှုမရှိသောကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့်ဤသုံးစွဲသူများသည်လက်ရှိတည်ရှိနေသောအခြေအနေများနှင့်သူတို့ကိုစွဲလမ်းမှုအတွက်ထူးခြားစွာအားနည်းချက်များဖြစ်စေနိုင်သည် (ခေတ်နောက်ကျတတ်သူများ (သို့) အသစ်အဆန်းရှာဖွေသူများ) ဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောစွဲလမ်းမှုလွန်ကဲသောယူဆချက်ရှိသည်။ သို့တိုင် အသစ်သောသုတေသန ကြောင်းယူဆချက်ကိုထုတ်ဆောင်သောမပေးပါ။ ထို့အပြင်အခါညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဦးနှောက် overstimulating ရပ်တန့်, အမြားအပွားကိုပြန် bounce အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရန်။ ဤအချက်က“ ပုံမှန်” ဦး နှောက်သည်ယနေ့ hypersexual ကိုလှုံ့ဆော်ရန်အားနည်းချက်ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။
ညစ်ညမ်းတဲ့သူတိုင်းကသူ့ဘ ၀ ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့်အဆင့်အထိမသုံးဘူးဆိုတာကိုတော့သက်သေမပြနိုင်ပါဘူး။ အရက်ကိုသုံးသူတိုင်းအရက်မသောက်ကြသော်လည်းအရက်သည်စွဲလမ်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အချို့ကျွမ်းကျင်သူများကအတိတ်ကသုတေသနများမှရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းဖြစ်စဉ်များကိုလုံလောက်စွာမဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်အတင်းအဓမ္မအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းစေသောအရာအဖြစ်တံဆိပ်တပ်ရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ သို့သျောလညျး, က "ပျောက်ဆုံးနေ" သုတေသနကြောင့်ကြောင်းဖွယ်ရှိစဉ်းစားသည် အတိုင်းအတာများစိန်ခေါ်မှုများ အစားဖြစ်ရပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့၏မရှိခြင်းထက်။ တရားဝင်သုတေသန၏မရှိခြင်းအတွက်ဒီမှာဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်အသုံးပြုသူအမည်မသိအွန်လိုင်းပို့စ်များကိုရယူထားသည်းခံစိတ်၏အထောက်အထားမြောက်မြားစွာ Self-အစီရင်ခံစာများနေသောခေါင်းစဉ်:
2019 ၏အဖြစ်, porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 55 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
သဘာဝက dopamine ထုတ်လွှတ်မှု၏အထက်ပိုင်းမှာလိင်ဖြစ်သည်။ သီအိုရီအရညစ်ညမ်းရုပ်သည်လိင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်မဟုတ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့လူအများစုကလိင်မဆက်ဆံဘဲလိင်ဆက်ဆံကြတာပါပဲ။ ၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ပညာရှင်အများစုကတစ်ချိန်ကညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှုတည်ရှိသည်ကိုငြင်းဆိုရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်
(အဆုံးစွန်သောအဆိုပါဘတ်ဇ်ပိုကြီးပင်သော်လည်းလျော့နည်းအကြိမ်ရေနှင့်အတူဖြစ်ပျက်သောကွောငျ့, တကယ်တော့အလွန်စွဲလမ်း-ပိုပြီးဒါဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်းထက်သောအရာ, စီးကရက်ထုပ်ဆေးလိပ်နဲ့တူဝယ်လိုအားအပေါ်အများအပြား hits) နာတာရှည်အသုံးပြုမှုနှင့်
၎င်းအားသဘာဝအ satiation ယန္တရားများ
နှစ်ခုလုံး dopamine dysregulation နှင့်စွဲအထောက်အကူပြုရန်။ ထို့အပြင်၊ လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစတင်ထုတ်လွှင့်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ ဦး နှောက်များသည်မျက်နှာပြင်များ၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးများကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွပေးနေပုံရသည်။ voyeurism၊ အဆုံးမဲ့အသစ်စက်စက်၊ ပိုမိုအစွန်းရောက်သောလှုံ့ဆော်မှု၊ သုံးစွဲသူများသည်မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုသတင်းပို့ကြသည်။ လေ့လာရေး အနိမ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက် ဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။
တစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူမျှသာအခမဲ့နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် dopamine ၏စဉ်ဆက်မပြတ် hits ရယူနိုငျသောကွောငျ့တစ်လိင်စှဲလမျးသူတစ်ဦးတစ်ခုလုံးကို seductive တဆင့်သွားရမည်သော်လည်းပထမဦးဆုံးအချက်မှလေးစားမှုနှင့်အတူ, လိင်စွဲထက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်ပိုပြီးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ဖွယ်ရှိရှိပါတယ်သို့မဟုတ် အခြားအရိုးရာဓလေ့။ သာမန်မွတ်မပြေနိုင်သော၎င်းအား ပတ်သက်. ဒုတိယအချက်မှလေးစားမှုနှင့်အတူ, ခဏအဝလွန်လူတွေစဉ်းစားပါ။ ဦးနှောက်သုတေသနအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြသ အစားအသောက်စွဲဆိုလိုသည်မှာ, သူတို့ရဲ့ကြောင်း dopamine receptors ငြင်းဆန်ခဲ့ကြ။ သို့သျောလညျးသာဆူအောင်ကျွေးသောသို့မဟုတ်ချိုမြိန်အစားအစာထုတ်စားခြင်း တဝက် dopamine ကိုလိင်၊ အပြည့်အဝ / စိတ်ကျေနပ်မှုခံစားချက် (အစာမစားသည့်အခါအစာစားခြင်း၊ မချိုသာသည့်အချိန်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုထင်ရသည် dopamine dysregulation တချို့၌တည်၏။
'' ဟုခေါ်တွင်တစ်ခုခုလည်းရှိပါတယ်ာင်း'ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်' နှင့်ဤစာမျက်နှာ၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုများစွာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိကြောင်းသက်သေပြသည်။
အခုတော့ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအင်တာနက်အသုံးပြုသူသူတို့က၎င်း၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုအသိပေးရွေးချယ်မှုလုပ်ပေးနိုင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းမှတားမြစ်ခြင်းမရှိသောလက်လှမ်းရှိသည်။ အသိပေးထားသောရှေးခယျြမှု hypersexual ပစ္စည်းများများ၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကို၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. In-depth ကိုသုတေသနပြုရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဤအတောအတွင်းကြောင့်လအနည်းငယ်အဘို့သင်၏အသက်တာကနေအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစမ်းသပ်ချက်စေနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်ကိုဆွဲရန်ပညာရှိဖြစ်၏။
သုတေသီများသည်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများခွဲထုတ်ဖို့ညစ်ညမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန် porn အသုံးပြုသူများသည်ဟုမေးလျှင်ကောင်းသောလိမ့်မည်။ ပိုများသောသုတေသနကိုလည်းမေးရန်လိုအပ်ပါတယ်:
အထွေထွေလူဦးရေ၏အဘယျရာခိုင်နှုန်း, Pre-တည်ဆဲမမှန်ခြင်းမရှိဘဲ, စွဲဖြစ်လာသို့မဟုတ် porn-related ရောဂါဗေဒဖွံ့ဖြိုး?
ဘယ်နှစ်ယောက် compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုတင်အဘယ်သူမျှမကအခြားစွဲလမ်းခဲ့?
ဘယ်လောက်ကြာကပုံမှန်အား symptomatic မှမျိုးကို Asymptomatic ကနေတိုးမှလေးလံသောအသုံးပြုသူများကိုယူသနည်း? (ဤကိစ်စတှငျပြန်လည်နာလန်ထူ Self-အစီရင်ခံစာများပူဇျောပါပွီသူအသုံးပြုသူအများဆုံးခိုင်မြဲစွာမိမိတို့၏ရောဂါလက္ခဏာတွေတဖြည်းဖြည်းလျစ်လျူရှုရန်လည်းပြင်းထန်ဖြစ်လာခဲ့သည်မတိုင်မီတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှစ်ပေါင်းအန္တရာယ်ကင်းခဲ့ယုံကြည်သည်။ )
သူတို့ကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ် porn အသုံးပြုသူများသည်အမှတ်တမဲ့မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ rewiring ပါသလား?
porn-အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်သော (အမျိုးသမီးတွေသတင်းပို့) ကိုတုန်ခါအသုံးပြုမှုအနေဖြင့်နုပျို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ထုံ clitorises ဖြစ်ပါသလား
compulsive အသုံးပြုမှုဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်လှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမိုလွန်ကဲကြီးထွားအဖြစ် porn စွဲ၏ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, ရှိပါသလား? (အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောယခု virtual reality porn ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ )
အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိဆယ်ကျော်သက် / pubescent ဦးနှောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဦးနှောက်ထက် porn စွဲဖို့ပိုအားနည်းချက်ရှိပါသလဲ
ဘယ်လောက်ကြာကယေဘုယျအားဆိုးရွားစွာသူတို့ဖြတ်သည့်အခါပုံမှန် sensitivity ကိုပြန် bounce မှထိခိုက်သူတွေရဲ့ဦးနှောက်ကို ယူ. , အဘယျသို့အချိုးအကွေ့အရာ neurochemical ဖြစ်ရပ်များကိုထင်ဟပ်? ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်ရှိတဲ့ Junk-အစားအသောက်နှင့်အတူရေလွှမ်းခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ငါးဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသောကြောင့်ယဉ်ကျေးမှု Self-ထိန်းချုပ်မှုအဝလွန်ခြင်း- မှလွဲ. ကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းချက်မှအဆီဖြစ်လာဖို့ predisposed သူတစ်ဦးကံအနည်းငယ်များအတွက်ဆန့်ကျင်ကလူကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ယူဆ။ ယနေ့အမေရိကန်တွေ၏ 79% 25 + ၏ BMI (18.5-24.9 30 အဝလွန်, သာမန်ဖြစ်ပါတယ်) ရှိသည်, သူတို့၏အမျိုးအထက်ဝက်ခန့် 30 + မှာပြီးသားဖြစ်တယ်။ ထိုအခါယူအက်စ်အေသာဖြစ်ပါသည် အဋ္ဌမ fattest တိုင်းပြည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအစာပြောင်းလဲပြီသကဲ့သို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားချင်ရှိသည်။ မွတ်မပြေနိုင်သောမှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ် supernormally porn စားသုံးမှု streaming, လှုံ့ဆော်၏ဖြစ်ရပ်၌ဤဖြစ်ရပ်ဆန်းဆန့်ကျင်လုံလောက်သောကာကွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ယူဆနိုင်ပါသလား?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်လူ့အရသာဘူးသီး titillate မှတွက်ချက်ပေါများ, စျေးပေါအစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသကဲ့သို့, သူတို့ကလည်းပွတ်ဆွဲမှာဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ titillation မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်သို့မဟုတ် click နှိပ်ခြင်းမရှိပါ။ Numbed ဦးနှောက်ကိုပိုနှိုးဆွရှာအံ့သောငှါ, ဒါ / ပွတ်ဆွဲခြင်း porn မှကလစ်နှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ဆိုဒါ gulping အားဖြင့်ဦးနှောက်ကို goose ဖို့နေရာအနှံ့ရွေးချယ်စရာအတိတ်စဉ်မြေးဆက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်စွန့်စားမှုပါဝင်သည်။ သဘာဝကစစ်ကူ၏ "သဘာဝ" မူကွဲအန္တရာယ်မှာထားစေခြင်းငှါဖွယ်ရှိဒါဟာင် အသုံးပြုသူလူဦးရေရဲ့ထက်ပို အခြားအစွဲလမ်းတ္ထုများ / အပြုအမူတွေပြုပါထက်။
ထိုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း streaming မှ porn မဂ္ဂဇင်းများအနေဖြင့်မကြာသေးမီလြော့ပေါ့ကဲ့သို့အကူးအပြောင်းအဖြစ်တစ်ဦးကလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့အဖြစ်မှန်သည်, ကွေးနောက်ကွယ်မှသုတေသနထားခဲ့နိုင်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိုအပ်သောဦးနှောက် porn သုံးစွဲသူများသုတေသနနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်စိုးရိမ်မှုတွေကောင်းစွာ grounded နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအန္တရာယ်များသို့မဟုတ်တားမြစ်ထားအောင်နေဖြင့်ညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိစေသည့်ထားတဲ့ကြည့်ရှုရန်ဆူညံ porn ဆွေးနွေးငြင်းခုံနှစ်ဖက်စလုံးကိုကူညီနိုင်ဘူး။